प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरे पुन: एकलौटी निर्णय, युवराज खतिवडा र सुर्य थापाका भाईलाई नियुक्ती ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गरे पुन: एकलौटी निर्णय, युवराज खतिवडा र सुर्य थापाका भाईलाई नियुक्ती !
काठमाडौँ – स’त्तारुढ नेक’पाको वि’वाद स’माधान भए’र सह’मतिमा सर’कार र पार्टी स’ञ्चालन हुने’मा क’तिपय ने’ताहरु वि’श्वस्त देखि’ए पनि ओ’लीले भने सह’मतिको २ दि’नपश्चात् नै एक’लौटी सर’कारी नि’युक्ती दिन सु’रु गरे’का छन् । भ’र्खरै मात्रै प’दावधि स’किएर अर्थमन्त्री’बाट हटे’का यु’वराज खतिव’डालाई विशेष आ’र्थिक सल्लाह’कार नि’युक्त गरेपछि आ’लोचना बढे’को हो ।
ना’नीदेखिको बा’नी भने’जस्तै नेक’पाका अ’ध्यक्ष एवं प्रधा’नमन्त्री केपी ओ’लीले ला’भको पद’मा पुनः आफू अनुकु’लका मानि’सको नि’युक्ति शुरु गरि’सकेका छन् । विभिन्न नियु’क्तिमा एक’लौटी गरेपछि चु’लिएको पार्टीको विवा’द मिलेको भनि’एको केही दि’नमै उनले पुरानै प्र’वृत्ति दोहो’र्याएका हुन् ।
प्रधा’नमन्त्री ओ’लीले राष्ट्रिय’सभाको पदा’वधि सकिएपछि अर्थ’मन्त्रीबाट हटे’का युव’राज खति’वडालाई आर्थिक सल्लाह’कार नि’युक्त गरेका छन् । पा’र्टीको वि’धानमै सह’मति भन्ने बुँदा उ’ल्लेख गरे पनि उनी प’दीय दा’उपेचबाट माथि उठ्न न’सकेको नेता’हरू बताउँछन् ।
सर’कार सञ्चाल’नमा एकलौटी निर्णय गरेको, आफ्ना मानिसलाई मात्रै सरकारी नि’युक्ति दिएको र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा उदासीन रहेको आरोप पनि ओ’लीलाई लाग्दै आएको छ । पदीय ल’डाइँका लागि ला’मो समयसम्म चलेको पार्टीको वि’वाद केही सम’यका लागि मि’लेको देखिए पनि केही सम’यपछि अवस्था पुनः उस्तै हुने वि”श्लेषण गरिएको छ ।
पार्टीभित्रको श’क्तिसंघर्ष र ने’तृत्वको का’र्यशैलीप्रतिको अ’सन्तुष्टिका का’रण चुलिएको नेक’पा वि’वाद स’माधान हुन नपा’उँदै प्रधानमन्त्री ओ’लीले उही रू’प देखाउन थाले’का हुन् । सि’द्धान्त र पा’र्टीको वि’धान नै भु’लेर पदीय भा’गबण्डा स’माधानमा के’न्द्रित बनेको ने’कपा नेतृत्वले सर’कार र पा’र्टीलाई चु’स्तदु’रुस्त च’लाउनेमा आ’शंका उत्पन्न हुन था’लेको छ ।
यो खबर पढे पश्चात् तपाईलाई कस्तो अनुभव हुँदैछ नी? प्रतिक्रिया दिनुहोला । योहो खबरबाट
Previous कुलमानले मान्छे उचाले भिडभाड गराए पैसा खर्च गरेर प,त्रकार खटाए: पुर्वउर्जा मन्त्री भिडियो सहित!
“कक्षा १२ को,परीक्षा भदौमा”
‘राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार छैन’ भनेर सभामुख सापकोटाले भनेपछि ,,,,,,,